5 Tirakoobyada cadeynaya Qalabka Iibinta Mobilada ayaa si aad ah u hagaajinaya waxqabadka | Martech Zone
5 Istaatistikada cadeyneysa Qalabka Iibinta Mobilada ayaa si heer sare ah u hagaajinaya waxqabadka
Axad, Disembar 20, 2015 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waxaan la shaqeynaynay moobiil kumbuyuutar-kumbuyuutar-kumbuyuutar ah oo loogu talagalay in lagu iibiyo iibka si looga caawiyo dadaalkooda suuq-geynta. Waa tikniyoolajiyad cajiib ah oo koboc aan caadi ahayn lahaa sanadkii la soo dhaafay.
Wakiillada iibku way ka daaleen raadinta iyo baadi goobka dammaanadda iibka, waxay ka daaleen kala-goynta u dhexeeya wax soo saarka suuq-geynta iyo baahiyaha iibka, way ka daaleen gelitaanka xogta markay u direen dammaanadda rajada. FatStax waxay udub dhexaad u tahay dammaanadda dhammaan noocyada iyo noocyada barta internetka ama khadka tooska ah ee shaqaalahaaga iibka ahi ay ka ordi karaan iPad ama iPhone.
Dhawaan, wakiilka iibka ayaa la wadaagay sida ay u muujisay qolka macaamiisha halkaas oo aan lahayn qol, borojektar, iyo xiriir internet la'aan. FatStax ka hor, waxay ku qasbanaan lahayd inay dib u dhigto ama ay dib u dhigto kulanka. Taabadalkeed, waxay ku soo jiiday codsigooda caadada ah Ipad-keeda, waxay la wadaagtay fiidiyoow, waxay u dirtay dammaanadda barnaamijka, waxayna kicisay olole kobcin iyada oo loo marayo CRM iyo is-dhexgalka otomaatiga suuq geynta. La iibiyey
Kordhinta waxqabadka iibka kuma koobna FatStax. Qalabka iibinta mobilada ayaa wax ka badalaya habka iibinta waxayna u suurta gelineysaa isla markaana dardar gelineysaa iibinta shirkadaha soo diraya. Soo noqoshada maalgashiga waa mid deg deg ah:
60% kooxaha iibka ee waxqabadka sareeya waxay isticmaalaan a moobaylka #sales app, waxqabadka labanlaabmay
70%% # xayeysiis mobile-karti leh kooxuhu waxay ka warbixiyaan soo noqosho wanaagsan maalgashigooda
83% dadka wax iibiya ayaa leh qalabka iibinta mobilada ka dhig shirkadooda inay u muuqato mid goynaysa
Waxaa jiri doona koror ah 125% isticmaalka mobilka iibka 2da sano ee soo socota
Waxqabadka ugu sarreeya ayaa adeegsada tikniyoolajiyada iibka mobilada 3 jeer ka badan kuwa ka hooseeya waxqabadka
Hubi faahfaahinta dhammaystiran ee caddaynaysa maalgashiga qalabka iibinta moobiilka.
Tags: fattaxiibinta mobiladawaxqabadka iibka mobiladaqalabka iibinta mobiladaqalabka iibka
Sida loo Baro Hashtag-yada ugu Fiican
22, 2015 at 4: 46 AM
Waxaan jeclaan lahaa in la ii oggolaado inaan shaqeeyo saacado badan, oo la i siiyo qalab dheeri ah si aan u helo iib badan, laakiin waan fahmi karaa dhimista miisaaniyadda. Isku dayi doonaa qalabkan inkastoo